Faa'iidooyinka gaaska noolaha | Cusbooneysiinta Cagaaran
Adrian | | Biogas, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo, Hoyga Cagaaran, Deegaanka
Biogas waa hab deegaan ahaan loo soo saaro gaaska. Waxaa lagu soo saaraa burburka qashinka ama walxaha dabiiciga ah. Tiknoolajiyada loo baahan yahay si loo soo saaro gaaska noolaha waxaa loo yaqaan biodigester waana wax iska fudud maadaama ay ka kooban tahay qol ay ku jiraan qashinka dabiiciga ah sida haraaga cuntada, dalagyada, digada, iwm. bakteeriyada anaerobic kuwaas oo ah kuwa hoos u dhigaya arinta in mudo kadib loo badalo methane.
Gaaskaan waxaa loo isticmaali karaa kuleylka, karinta iyo howlaha kale sida gaas dabiici ah.
Faa'iidada ayaa ah inay yareynayso qaddarka qashinka adag ee degmada, ma dhaliyo saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo waana la cusboonaysiin karaa.
Tiknoolajiyaddani waa mid dhaqaale ahaan aadna waxtar ugu leh iskuulada, jikooyinka bulshada, warshadaha iyo beeraha, gaar ahaan meelaha gaaska dabiiciga ee shabakadu aanu gaarin.
Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa isticmaalka gudaha ee magaalooyinka laakiin waxaa lagama maarmaan ah in la helo qashin joogto ah si loo soo saaro gaas.
Ee qashinka dabiiciga ah koronto ayaa la dhalin karaa, waana sababta ay u tahay il muhiim ah oo inta badan la khasaariyo.
Waa xalka weyn ee bixinta korontada iyo adeegyada gaaska ee magaalooyinka yar yar iyo magaalooyinka fogfog.
Maxaa looga baahan yahay tan Tamar kale lagu guuleysto waa in la ogeysiiyo dadweynaha muhiimadda ay leedahay in aan la tuurin qashinka dabiiciga ah laakiin si loogu daro biodigesters si ay u shaqeeyaan.
Wadashaqeynta bulshada ayaa lagama maarmaan u ah inay shaqeyso maadaama qoys ama koox dad ah aysan ku filneyn inay soo saaraan qashin badan oo quudin kara biodigester.
Waa muhiim in wax laga beddelo hab-dhaqankeenna oo la caawiyo haddii ay magaaladdeenna ku taalo warshad noole ah.
La soco in qayb weyn oo ka mid ah maaddooyinka aan qashinka u tixgalino ay runtii yihiin alaab ceyriin ah oo na siin kara compost, gaas ama koronto.
Waxaa jira khibrado badan oo guuleysta adduunka oo dhan oo ku saabsan isticmaalka biodigesters si loo sameeyo gaas.
Yurub gudaheeda kaliya waxaa jira ugu yaraan 60 dhirta daaweynta qashinka dabiiciga ah.
Tani tamarta Gabi ahaanba waa la cusboonaysiin karaa oo nadiif ah, sidaa darteed waxaan runtii ka wada shaqeynaa hagaajinta deegaanka iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada noocan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Biofuels » Biogas » Faa'iidooyinka gaaska noolaha
MAWDUUCTAN WAA SI AAD U FIICAN SIDA AY IGA CAAWISO INTA BADAN QAADASHADA ....